Vashanyi chenjerai: Mhosva dzeRussia dzine njodzi zvakanyanya dzakaratidzwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » mhosva » Vashanyi chenjerai: Mhosva dzeRussia dzine njodzi zvakanyanya dzakaratidzwa
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • nhau • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vashanyi vekunze vanokweverwa kuRussia nedzimba dzayo dzinopenya dzemakereke, dzimba dzenhoroondo, nzvimbo dzinoshamisa uye hunhu hunoshamisa. Asi, pamwe neizvo zvinopenya zvekushanya, Russia zvakare ine nharaunda dzakashata kwazvo dzinofanira kudzivirirwa nevashanyi nevagari zvakafanana. Uye izvozvi vakaunganidzwa mune runyorwa nyowani yenzvimbo dzinotyisa dzematsotsi dzenyika.
Yakakurumbira Russian YouTuber yakagadzira vhidhiyo nyowani inoverenga pasi kumusoro-gumi nzvimbo ine yakanyanya mhosva mhosva, kusarudza kuti nderipi 'guta rine ngozi kwazvo kuRussia'.
Madhorobha makuru madhorobha akadai seMoscow neSt.Petersburg hazvishamise pachiratidziro, nemitengo yematsotsi yakafanana nemamwe maguta makuru. Zvakare kugadzira iyo yepamusoro gumi ndedzimwe nzvimbo dzaungangodaro usina kumbonzwa nezvadzo.
Guta guru reRussia rinonyanya kuzivikanwa neRed Square yakawedzera, ichimanikidza Kremlin, neCold War-era intrigue, nekuda kwenzvimbo dzakaita seGorky Park.
Denda iri risati rasvika, guta iri raidhonza pakati pevane mamirioni gumi nemanomwe kusvika makumi maviri nevaviri gore rega rega. Nepo ruzhinji rwavo rwusinga sangana nechinhu chine njodzi kupfuura mirwi hombe yemarara, guta guru reEurope rinewo rima.
Sekureva kwevhidhiyo, muguta rino munogara mamirioni gumi nemaviri, mhosva dzinopfuura zana nemakumi mana dzakamhan'arwa gore rapfuura, kusanganisira makumi maviri neshanu ehumhondi uye kuyedza kuuraya. Asi usabvarura Moscow kubva pane yako bhaketi runyorwa parizvino - kunyangwe uine mamirioni mana vagari vashoma, New York yakawedzera 12 panguva imwecheteyo nguva.
Vhiki rapfuura, kutsvaga kwakatangwa mumuzinda weRussia mushure mekunge mudzidzisi wekutamba apfurwa ndokuurawa masikati machena. Ipo mukomana wake paakatanga kufungidzirwa, tarisiro yacho yakashanduka kuzoziva mushandi wekuvaka wekuenda waaiti anga achimunyeya kwevhiki dzinoverengeka.
Sezviri pachena iro guta guru retsika, nyika yechina pakukura guta rakanzi Russia "hwindo kuEurope" nekuda kwayo yakakosha Gungwa reBaltic. Yakavakwa kubva pakutanga muzana ramakore rechi 18, rakapedziswa neyakavakirwa yechinyakare nemigwagwa inoyevedza, St. Petersburg yakashanda kwenguva pfupi seguta guru renyika.
Asi imba yepasi rose yaPushkin, Dostoevsky, naTchaikovsky ine chekuvanza? Kuenda nenhamba yenguva yakachinja zita rayo, pamwe. Pakutanga yakavambwa saSankt-Pieter-Burch, yakafuridzirwa nemaDutch, yakazotumidzwa zita rekuti Petrograd munguva yeHondo Yenyika I. Mushure mekutorwa kweBolshevik, yakatumidzwa zita rekuti Leningrad, mushure mebaba vechimurenga iye. Uye, muna 1991, vhoti yevagari yakagara pazita rayo razvino.
Tichifunga kuti ndiyo imwe-inodiwa kwazvo yevashanyi hotspot, zvingave zvakaoma kufungidzira kuti ongororo yeWeTuber yaizoona kuti guta rakanyoreswa mhosva makumi mashanu nemashanu muna55,000, ne2020 kuyedza kuuraya.
Yakagadzira zvinyorwa gore rapfuura apo mupurofesa wenhoroondo, Oleg Sokolov, akawanikwa murwizi rweMoyka rwunotonhora. Vashandi vekununura vakakatyamadzwa kuwana vaviri vevakadzi vakacheka maoko muhombodo yake, kuferefetwa kuchiratidza kuti akauraya uye akatsemura mudzidzi wake-makore-makumi maviri nemashanu aimbova mudiwa. Aimbove mudzidzi akapiwa mutongo wemakore gumi nemaviri svondo rapfuura
Guta guru reUral nharaunda yeRussia, Ekaterinburg iri kumucheto kweEurope. Guta rechina pakukura munyika rinozivikanwa nenzvimbo dzayo dzekudyira, pamwe nerenje riri pedyo, uye senzvimbo pakaurayiwa mhuri yeumambo yeRussia, maRomanovs, nevatapi vavo vechiKomonisiti muna 1918.
Guta guru rine kukudzwa kunopokana kwekurova Moscow muhuwandu hwemhondi uye kuyedza kuuraya kwakaitwa ikoko gore rino, nemakumi maviri neshanu akanyorwa naNovember, sekureva kwaVarlamov.
Pakutanga svondo rino, murume anobva mudunhu rakapoteredza Ekaterinburg akabatwa nemhosva yekuponda uye akapihwa makore mapfumbamwe mutirongo mushure mekupa pfuti yake kune wechidiki akaremara njere sechikamu chedzidziso yekudhakwa. Pfuti imwe yakarova Yegor Korkunov ane makore manomwe, uyo akafa mushure memwedzi mu comatose state muchipatara.
Yakagadzwa nedzinza Cossacks, Rostov-on-Don iguta reAzov rechiteshi chengarava rine vanhu vanopfuura miriyoni. Iyo inozivikanwa neyakavakirwa nhare yayo yeTurkey-nhare, iyo yemitambo yakavakirwa muchimiro chetarakita, uye nemaonero ayo akatsvaira pamusoro perwizi Don, mushure mayo yakazotumidzwa zita.
Rostov anorova pamusoro pehuremu hwayo kana zvasvika kune avhareji mhosva dzakadai sekuba uye kubiridzira, kuiwana nzvimbo pachiratidziro. Zvinosuwisa, anoona kuti inenge hafu inoramba isina kugadziriswa.
Guta iri raimbova musha kuna Andrei Chikatilo, anozivikanwa nemaRussia seButcher yeRostov. Injiniya wekutaurirana akauraya vangangosvika makumi mashanu nemaviri vasati vayaruka vakomana nevasikana vadiki muSoviet Union pakati pa52 na1978, vasati vazosungwa. Akaurayiwa nechikwata chekupfura muna 1990.
Inowanikwa chete kukanda ibwe kubva kuRostov, mhosva muShakhty inonzi yakanyanya kuipa kupfuura mudunhu redunhu. Iro zita raro rinoshandurwa chaizvo se 'migodhi,' sezvo raikura kubva munzvimbo yakavakirwa vashandi vanobvisa marasha kubva kunharaunda yakatenderedza.
Ikozvino, zvakadaro, yakawanda yemigodhi yakapihwa pachivande kana kuvharwa, uye guta rakadzokororwa semumwe wevanogadzira varimi uye vatengesi vematiles muEurope. Kufanana nenzvimbo zhinji dzekare dzeindasitiri, Shakhty inowanzoitika pazvinyorwa zvemaguta akanyanya kuRussia, nevanhu vemunharaunda vachiratidza kunetsekana nenzvimbo dzinoverengeka dzakashata padyo.
Rimwe guta rinozivikanwa nenhaka yaro yeindasitiri, Chelyabinsk isimba rezvehupfumi reSiberia, rinotonga zvikamu senge simbi uye kugadzira zvombo.
Kunyangwe iri diki saizi, Chelyabinsk yakanyora mamwe matsotsi kupfuura kuputika kweMoscow gore rapfuura, uye, nepo zvakachengeteka kune vashanyi vanotora njanji yeTrans-Siberian kuyambuka nzvimbo huru yekumabvazuva kweRussia, kuparadza nekuba zvakajairika kuno kupfuura kumwe kunhu, maererano nenzvimbo yaVarlamov.
Gore rakapera, vakuru veguta vakaridza mhere apo mumwe murume akabatwa achizviita chiremba mune kiriniki yemuno. Nekudaro, diploma rake rekunyepera raitaridza kuve risinganyanyoenderana nechikamu chenyaya, pazvakaonekwa kuti akaita humhondi hunotyisa anopfuura makumi maviri emakore apfuura. Semwana wechikoro, Boris Kondrashin akakwevera waaidzidza naye kumba kwake, akamupa muyero unouraya wevanyaradzi uye akabvarura muviri wake.
Zvinenge zvakaoma kusvika kwazviri sekureva, Blagoveshchensk iguta riri kure repamuganhu riri pamuganhu neChina ine huwandu hwevanhu vanosvika kota yemiriyoni. Vashanyi vanorayirwa kuti vasarasikirwe nemuseum yaro, iine zviratidziro pamhuka dzesango dzemuno uye nemararamiro enhoroondo evatambi vaimbogara munzvimbo iyi.
Dzinenge zviuru makumi maviri zvemhosva zvakaitwa mukati meguta izvo, zvakapihwa vanhu vayo vashoma, zvinokwana kuiwana nzvimbo pane yakanyorwa.
Imwe nzvimbo yekusvetuka kubva panjanji yeTrans-Siberian, Ulan-Ude ndeimwe yenzvimbo dzinonakidza dzeRussia dzinonyungudika hari, senzvimbo yeTibetan Buddhism muRussia. Ethnic Buryats, boka rinofamba-famba rine hukama neMongolia, rinoumba chikamu chimwe muzvitatu chevagari, uye rakakurumbira nekuda kwetembere dzaro dzechinyakare nekusvikika nyore kweLake Baikal.
Nekudaro, zvinokwezva zvevashanyi padivi, iro guta riri munzvimbo dzevatatu vepamusoro pane iyo runyorwa rwekuti vanokwezva mhosva makumi maviri nemaviri - zvakapetwa katatu zvakapetwa kupfuura avhareji yenyika.
Kuenda neimwe nzira kuratidza kuti matsotsi anofara kushanda chero mamiriro ekunze, Magadan iri paGungwa rine chando reOkhotsk uye inozivikanwa nekuda kwayo tembiricha yepasi-zero, iyo yadonha yakadzika se -30 madhigirii.
Kunyangwe mibairo yemuno iri yakakwira, nekuda kweiri kusimukira indasitiri chikamu, inowana nzvimbo pachinyorwa nekuda kwekuuraya makumi matatu nemana kwakaitwa imomo mu34 - kakapetwa kashanu, pro rata, kupfuura avhareji.
Nepo Magadan anga aine mashoma kuuraya kwepamusoro mumakore apfuura, nzvimbo yemuno inozivikanwa nekufa kunosiririsa. Mugwagwa mukuru unoenda kuguta kubva kuYakutsk unozivikanwa seMugwagwa weMabhonzo, nezviuru zvakafa zvichivaka nzira yeSoviet Era, zvichinzi zvakavharirwa mukati mekongiri, pane kuvigwa mu permafrost.
Guta guru renharaunda yeTuva, Kyzyl haizivikanwe nevashanyi, kunyangwe ichinzi iri panzvimbo chaiyo yeiyo 'Center of Asia'. Zvivakwa zvaro uye mavhiri eminamato echiBuddha anoita kuti zvikoshe kushanya iri yega, asi chinzvimbo chayo se "guta rine njodzi kwazvo muRussia" inogona kukwezva vafambi vatsva.
Nepo mhosva dzemhirizhonga dzakadzikira mukati megore ra2020, nemitemo mitsva yekupa marezenisi edoro uye zvirambidzo zvekufamba zvaiswa nekuda kwedenda reCovid-19, sekureva kwevhidhiyo, dunhu iri rinotungamira mukuuraya nehurema hukuru, nekuuraya makumi matatu neshanu. 35 vagari.